Kuvandudza Magento Performance uye Yako Bhizinesi Mhedzisiro | Martech Zone
Magento inozivikanwa seyepamusoro e-commerce chikuva, ichimisikidza kusvika kune chimwe muzvitatu chese ari pamhepo mawebhusaiti ekutengesa. Yayo hombe mushandisi base uye yekuvandudza network inogadzira ecosystem uko, pasina hunyanzvi hunyanzvi, chero munhu anogona kuwana e-commerce saiti kumusoro uye kumhanya nekukurumidza.
Nekudaro, pane parutivi pasi: Magento inogona kurema uye kunonoka kana isina kunyatsogadziriswa. Uku kunogona kuve kwechokwadi kudzima kwevatengi vanhasi vanomhanya-mhanya avo vanotarisira nekukurumidza mhinduro nguva kubva kumawebhusaiti avanoshanyira. Muchokwadi, maererano ne ongororo ichangoburwa kubva kuClustrix, Makumi mashanu muzana yevanhu vangashopota kumwe kunhu kana webhusaiti ichitora mapeji zvishoma nezvishoma.
Kukura kudiwa kwewebsite kumhanya kwafambisa kusimudzira mashandiro eMagento kumusoro kwechinyorwa kune vazhinji vanogadzira hunyanzvi. Ngatitarisei nzira nhatu makambani anokwanisa kuvandudza mashandiro epuratifomu yavo yeMagento.
Shandisa iyo Yunivhesiti Yekutumira Nekutumira (CDN)
Zvemukati Dhirivhari Networks inobvumidza iwe kuburitsa yako saiti mifananidzo uye zvimwe zvimisikidzo zvemukati kune dhata nzvimbo dziri padyo nevatengi vako. Kuderedza rwendo rwekufamba zvinoreva kuti zvemukati zvinosvika ipapo nekukurumidza. Panguva imwe chete, nekuburitsa-kurodha zvirimo kubva kune yako webhusaiti dhatabhesi, iwe unosunungura-up zviwanikwa kubvumidza kunyangwe vamwe vashanduki vashoma, pamwe zvirinani zvirinani peji-mhinduro nguva. Dura rako re database rinoshanda zvakanyanya uye zvakanyanya kushanda kana richigona kuramba rakanangana nekugadzira, kugadzirisa, kusimbisa uye kupedzisa zviitiko. Kubata kuverenga-chete mune yako dhatabhesi kunogadzira isingadzivisike isingakoshi mutoro uye bhodhoro kune yakakwira-traffic e-commerce saiti.
Nyatso kugadzirisa yako dhatabhesi server
Magento inoita mibvunzo yakafanana kune dhatabhesi server nguva yega yega peji painotariswa, kunyangwe pasina shanduko zhinji mumibvunzo iyi nekufamba kwenguva. Iyo data inofanirwa kutorwa kubva ku diski kana yekuchengetedza midhiya, yakarongedzwa uye kushandisirwa, uyezve ndokudzoserwa kumutengi. Mhedzisiro yacho: kunyura mukuita. MySQL inopa yakavakirwa-mukati gadziriso paramende inonzi query_cache_size iyo inotaurira iyo MySQL sevha kuti ichengete mhedzisiro yemubvunzo mundangariro, iyo inokurumidza zvakanyanya kupfuura kuwana kubva diski.
Kuderedza zvikumbiro, kushandisa CDN uye kugadzirisa iyo MySQL dhatabhesi dhatabhesi, inofanirwa kuvandudza kuita kweMagento; zvisinei kuchine mamwe mabhizinesi anogona kuita kukwidziridza saiti kuita kwese. Kuti uite kudaro e-commerce saiti manejimendi anofanirwa kuongorora iyo backend dhatabhesi reMySQL zvachose. Heino muenzaniso weapo kuyera MySQL kunorovera kumadziro:
(Re) Ongorora Dhatabhesi yako
Mazhinji matsva e-commerce saiti anotanga kushandisa database yeMySQL. Iyo yakaedzwa nguva-yakaedzwa dhatabhesi yemasaiti madiki. Ipapo ndipo pane nyaya. MySQL dhatabhesi vane yavo miganhu. Mazhinji MySQL dhatabhesi haigone kuenderana nezvinokura zvinokurumidza zvee-commerce mawebhusaiti, kunyangwe yakagadziridzwa Magento kuita. Nepo nzvimbo dzirikushandisa MySQL dzinogona kuyera zviri nyore kubva zero kusvika mazana maviri evashandisi, dzinogona kudzipwa kana dzichikwira kubva pa200,000 kusvika ku200,000 vashandisi nekuti ivo havakwanise kukwira zvinowedzera nemutoro. Uye isu tese tinoziva, kana webhusaiti isingakwanise kutsigira commerce nekuda kwedhisheni rakashata, iro bhizinesi 'repazasi rinotambura.
Funga mhinduro nyowani - Neraki, pane mhinduro: NewSQL dhatabhesi inochengetedza iwo ehukama mazano eSQL asi wedzera iko kuita, scalability uye kuwanikwa kwezvinhu izvo zvisipo kubva kuMySQL. NewSQL dhatabhesi inobvumidza mabhizinesi kuti aite mashandiro avanoda kumabasa avo akakosha, akadai seMagento, nepo vachishandisa mhinduro dzine hushamwari kune vanogadzira vakatodzika midzi muSQL.
Shandisa nzira yekuyera-kunze - NewSQL ndeyehukama dhatabhesi iyo inozvirumbidza iyo yakatwasuka kuyerwa mashandiro, kuvimbiswa kweACID kutengeserana uye kugona kugadzirisa makuru mavhoriyamu ezvekutengeserana neakanakisa kuita. Basa rakadai rinovimbisa kuti ruzivo rwevatengi rwekutenga harunetse nekudzora kana kubvisa chero kunonoka kwedigital kwavangatsungirire. Zvichakadaro, vanoita sarudzo vanogona kuongorora data kuti vanzwisise nzira dzekunanga vatengesi vane mikana yekutengesa-uye yepamusoro-yekutengesa.
E-commerce saiti dzisina kugadzirirwa hadzizoshande mushe kana dzikasashongedzerwa kubata zvinhu zvinorema, kunyanya panguva dzekuwedzera kwemigwagwa. Nekushandisa chiyero-kunze, chinokanganisa-kushivirira dhatabhesi reSQL, unogona kuona kuti yako e-commerce saiti inokwanisa kubata chero huwandu hwemotokari mune chero mamiriro ezvinhu, pamwe nekupa vatengi ruzivo rwakashama rwekutenga.
Kuburitsa chiyero-kunze SQL dhatabhesi zvakare kunowedzera Magento mashandiro. Kubatsira kukuru kweiyero-kunze kweSQL dhatabhesi ndeyekuti inogona kukura zvine mutsindo kuverenga, kunyora, kugadzirisa uye kuongorora sezvo mamwe mapoinzi edhata uye zvishandiso zvinowedzerwa. Kana zviyero-zvekuvaka zvasangana negore, mashandisiro matsva anogona nyore kutora iko kuwedzerwa kwevatengi vatsva uye nekuwedzera kutengeserana vhoriyamu.
Uye zvine hungwaru, iyo database yeNewSQL inogona kugovera pachena mibvunzo kumaseva akawanda e database, nepo ichitakura-kuenzanisa nzvimbo yako yebasa. Heino muenzaniso weNewSQL dhatabhesi, ClustrixDB. Iri kumhanya nhanhatu nvs server, ichigovera ese kunyora uye kuverenga-mibvunzo kune ese matanhatu node, uku uchichengetedza yakatarisa pane sisitimu yekushandisa mashandisiro uye nemubvunzo kuuraya nguva:
Iva nechokwadi chehutano hwakanaka hwevatengi
Kana iwe uri muridzi webhizinesi, iwe unofanirwa kuita zvese zviri musimba rako kuona yakanaka e-commerce ruzivo kune vako vatengi, zvisinei nekuti yakawanda sei saiti yako saiti iri kubata chero nguva panguva. Mushure mezvose, kana zvasvika pakutenga pamhepo sarudzo, nhasi vatengi vane sarudzo dzisingaperi - chiitiko chakaipa chimwe chete chinogona kuvadzinga.
Tags: clustrixMagentomagento kuitamysqlnhauqlmutambo
Iyo Chikonzero uye Inokatyamadza Mhedzisiro yeDhata Nyaya